ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ဝင်ခွင့်များကို ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္က? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ဝင်ခွင့်များကို ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှရွေးချယ် ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းပြုလုပ်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများထဲတွင် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကိုလည်း လျှောက်ထားခဲ့ရာပထမ နှစ်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ ဝင်ခွင့်များကို ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်အနေဖြင့် ရွေးချယ် ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းမပြုလုပ်တော့ဘဲ သက်ဆိုင်ရာအဝေးသင်ဌာနခွဲများမှသာရွေးချယ်ပြီး ဝင်ခွင့်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှသိရသည်။
”ဆရာတို့ဘက်က ပထမနှစ် တွေအတွက် မလုပ်ရတော့ဘူး။ ဌာနခွဲတွေကပဲ ရွေးမယ်ထင်တယ်။ အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုလာဦးမလဲမပြောတတ် သေးဘူး”ဟု ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်မှသင်တန်းရေးဌာနမှူး ဦးအောင်ခိုင်သန်းက အောက်တိုဘာ ၁၈ တွင် ပြောကြားသည်။
ယမန်နှစ်ကအထိ ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်သည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးအ ဝေးသင်တက္ကသိုလ်လျှောက်ထား သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်များကိုစိစစ် ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဝင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်မှစကာ ပထမနှစ်သင်တန်းများ၏ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြု လုပ်တော့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်အနေဖြင့် ဒုတိယနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ်အထိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများကိုသာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
ယင်းအစီအစဉ်ကို သြဂုတ်လကကျင်းပခဲ့သော အဆင့်မြင့်ပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် စာတမ်းပြုစုပြီး ဆွေးနွေးထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် နောင်တွင်လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေရသော အဝေးသင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာမေးပွဲကိစ္စ၊ ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း အစရှိသည့်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအသီးသီးမှသာ အဝေးသင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများ ကို ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
”ဝင်ခွင့်ကတော့ ဒီနှစ်ကစ ပြီးဌာနခွဲတွေကလုပ်ဖို့အတွက်စီ စဉ်ထားတယ်။ နောက်ပိုင်းတစ်နှစ် ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးက နောက်ပိုင်းအွန်လိုင်းဘက်ကိုပဲ သွားတော့မှာ”ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်တို့တွင် ယခုနှစ်ဇွန်လအထိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ နှစ်သိန်းခြောက်သောင်းကျော် တက်ရောက်နေသည်။
စပါးမှောင်ခို တင်လာသည့် ကား ၁၇ စီးကို နမ့် ခမ်းမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
ဒီးဒုတ်ဆင်စခန်း မဖွင့်သေးသော်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသည်များ စတင် လာရောက်လည်ပတ်၍ စည်ကားနေ
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးအဖွဲ့များ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ စိန်ခေါ်မှုများကို NCA အေ??
လက်လုပ်လက်စား ရွှေလုပ်ကွက်များ တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁၁ သိန်းကျော် အခွန်ပေးဆောင်ရမည်